Nchịkọta Ọgwụ Ikuku Ikuku, Nchịkwa, Ndị Isi Ọrụ - Blch Pneumatic
U usoro FR.L nchikota
Wepu mmiri na urughuru nke oma. 40µm na 5µm nyo mmewere bụ n'ụzọ dị mfe na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe. Eziokwu ziri ezi ma dị mfe. Enwere ike imegharị mmanụ lubricator n’akwụsịghị ikuku ikuku. Mmanụ ịgba na alụlụ na-ahụ ezigbo mmanu maka igwe. Anti-acid & alkali nnukwu efere na aluminum nnukwu efere na-enye magburu onwe nchebe na organic onwu na-arụ ọrụ gburugburu. Lubricator oil (akwadoro): ISO-VG32
F usoro FR.L Nchikota
The max arụ ọrụ mgbali: 16bar, max tinyekwa mgbali: 12 mmanya Ọ nwere ike jupụta mmanụ n'ime mmanu dị ka akpaka usoro na-arụ ọrụ. Arụ ọrụ nke nrụgide ukpụhọde pụrụ ịdabere na elu nkenke. Ike nke iwepu mmiri na ọka siri ike dị elu.
AFC-BFC usoro FR.L nchikota
AC-BC usoro FRL nchikota
AFR-BFR usoro Ntinye ikuku
C usoro Air Lubricator
AR / BR usoro Air Regulator
HSV usoro slide Valve
ASC Usoro Ntugharị Control Control
Usoro Ntugharị Ntugharị Nyocha
3H-4H usoro Aka menjuobi valvụ
FV320-420 usoro Valkwụ Valves
CXSM20-50 Ugboro abụọ Rod Sịlịnda
SC50-150 Standard sịlịnda
P80 页 CU usoro Free Mount Cylinder
Metal otu aka oyiyi akwa
A naghị ahụ vidiyo vidiyo, o yikarịrị ka ihe nchọgharị gị anaghị akwado vidiyo HTML5
BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd hiwere na August 2004, ọ dị na mpaghara ụlọ ọrụ mmepe mmepe YUEQING. Companylọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara nke 24000 ㎡, na-enwe ntọala 5 na ihe karịrị ndị ọrụ 300. Ọ bụ a na-abụghị na mpaghara enterprise ọkachamara R & D, mmepụta, ahịa na ọrụ mmezi nke pneumatic mmiri ..
ỌKA ỌMM!! The "Esịtidem Pilot Guide nke nkenke Pressure mbenata valvụ" ọkọlọtọ nke na-edu drafted site anyị ụlọ ọrụ na-mma site Zhejiang Product Quality Association dị ka R ...
BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd hiwere na August 2004, ọ dị na mpaghara ụlọ ọrụ mmepe mmepe YUEQING. Companylọ ọrụ ahụ kpuchiri mpaghara 24000